ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို အဆိပ်သင့်စေတဲ့ အတွေးတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ? - Lifestyle Myanmar
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို အဆိပ်သင့်စေတဲ့ အတွေးတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ?
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ တကယ်အလုပ်ဖြစ်သော သဘာဝကုထုံးများ
ဒိတ်လုပ်တော့မယ့် မိန်းကလေးတိုင်း သေချာပေါက်သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
သင့်ရဲ့ရာသီခွင်အရ သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသော လက်တွဲဖော်၏ စရိုက်များ
သင်ဟာ People-Hater တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (6)ခု
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုံးစုံကောင်းကျိုးချမ်းသာကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ မကောင်းတဲ့အတွေးအမျိုးအစားတစ်ချို့ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အရေးကြီးါပတယ်။ ဥပမာ- တစ်စုံတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ချီးမွမ်းပါက ဒါက ကြီးကျယ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီး မငြင်းပယ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအစား ချီးမွမ်းမှုကို လက်ခံပြီး အမှန်တကယ် ချီးမွမ်းခံထိုက်ကြောင်း မိမိကိုယ်ကို ဝန်ခံသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေက ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားတာထက် ပိုစွမ်းအားရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အတွေးတွေကို သတိထားပါ။ ပြီးရင် သင့်ဘဝမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ချို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
အစွန်းရောက် တွေးခြင်းကို ဘာမျှမစဉ်းစားတဲ့တွေးခေါ်မှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အလုပ်မှာ အောင်မြင်ရမယ်၊ အိမ်မှာ မိခင်ကောင်း၊ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်လို ခံစားပါတယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေရဲ့အသေးအဖွဲ့ရှု့ထောင်လေးကိုတောင်မှ သင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပြီး စိတ်ပျက်လာမှာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးပါ။ black-and-white အသုံးအနှုန်းကို မသုံးဘဲ စတင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်- ကိုယ်က တခြားလူတွေ အနားမှာရှိနေတုန်း ကခုန်မိတာကို သတိထားမိမယ်ဆိုရင် “ငါကတာ အရမ်းများဆိုးရွားနေလား။” ” လူတိုင်းက ငါ့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြလိမ့်မယ် ၊ ငါရူးနေတယ်လို့ ထင်ကြမှာပဲ”လို့ မတွေးပါနဲ့။ အဲ့ဒီအစား ” ကခုန်ရတာကို ငါကြိုက်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ငါကြိုက်လို့ ငါကတာလေ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလူတွေနဲ့ နောက်တစ်ခါ တွေ့ရမှာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါ့ကြောင် သူတို့ဘာပဲထင်ထင် ကိစ္စမရှိဘူး” လို့တွေးပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ အပျက်သဘာဆောင်တဲ့ ရလဒ်နှစ်ခုက သင့်အားစိတ်ဆင်းရဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- အင်တာဗျူးတွေ အများကြီးလိုက်ဖြေပြီး အလုပ်တစ်ခုမှ မရရင် “ငါက အရှုံးသမားတစ်ယောက်၊ ငါဘယ်တော့မှ အလုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး”လို့ သင်တွေးပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျ မြင်တတ်အောင် ကြိုးစားပါ၊။ သင့်မှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေက တန်ဖိုးရှိကြောင်း၊ ထိုငြင်းပယ်မှုတွေကြားက သင်ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။
၃။ အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကို လက်မခံတာ
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အလုပ်ကို ချီးမွမ်းတဲ့အခါ ဒီချီးမွမ်းမှုက ငါနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးလို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ” မင်းအလုပ်ကောင်းတစ်ခု လုပ်ခဲ့တာပဲ” လို့ပြောတဲ့အခါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ဘယ်သူမဆို လုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးပါ” ပြောမိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ “ကျေးဇူးပါ”လို့သာ ပြန်ပြောပြီး သူက ကောင်းတယ်လို့သာ ငါ့ကိုပြောတာ ၊ အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ တကယ်ပြောတာကော ဟုတ်ရဲ့လား”လို့ တွေးမိနိုင်ပါတယ်။
အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကို လက်ခံဖို့ သင်ယူပါ။ သင့်ရဲ့ self-worth ကို တန်ဖိုးထားပါ။ ကိုယ့်အတွေးတွေကို အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ပုံရိပ်မှာတည်တံ့စေမယ့်အစား သင့်ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူဟာ အမှန်တကယ်ပြောတာလို့ ယုံကြည်ပြီး ချီးမွမ်းမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၃။ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သင့်စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးထားတာ
သင့်ကိုယ်သင် (သို့) သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာတွေကို စိတ်ခံစားချက်ပေါ် အခြေပြုပြီး ကောက်ချက်ချဖို့ ကြိုးစားခြင်းက သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ခြင်းနှင့် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေကို ရောက်ရှိခြင်းကနေ တားဆီးနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် တွေးခေါ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- စီးပွားရေးတစ်ခုစလုပ်ချင်ပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်မှာကို ကြောက်နေတယ်၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးက လွှမ်းမိုးထားသလို ခံစားရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ ကြောက်ပြီး ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင် သင်အမှန်ကယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးလို့ ထင်မိပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ အစမှာတင် အပျက်သဘောစဉ်းစားနေရင် ရှုံးနိမ့်မှုအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ၊ သင့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့နှင့် သင့်စွမ်းရည် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေကို အကောင်းမြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကြာခဏ အပြစ်တင်တတ်တာ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- သင့်ကလေးက ကျောင်းမှာ အဆင့်နိမ့်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကောင်းတဲ့မိဘလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ (ဒါမှမဟုတ်) သူငယ်ချင်းတွေအတွက် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ စားပွဲတစ်ခုကိုကြိုတင် ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပြီး ရောက်လာတဲ့အချိန်မှ သူတို့မှာ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားတဲ့ မှတ်တမ်းမရှိဘူးလို့ ပြောလာရင် နှစ်ကြိမ်မစစ်ဆေးမိခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်မိပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးက သူတို့ညကို ဖျက်ဆီးတဲ့အတွက် သင့်အားအပြစ်တင်ကြမယ်လို့ သင်ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ သင့်အမှားချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုကို စစ်ဆေးနေသူက မေ့သွားတာ၊ လွဲချော်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိပ်စက်ပြီး “ဒါ ငါ့အမှားပဲ၊ ငါဒါကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ရမှာ” လို့စဉ်းစားမယ့်အစား ” တစ်ချို့အရာတွေက သင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိမနေဘူး၊ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင် သင့်မှာတာဝန်မရှိဘူး”လို့ လက်ခံပါ။
၆။ “ရမယ်”, “သင့်တယ်” စတဲ့စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုတာ
အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ ဒီစကားလုံးတွေကို အသုံးပြုခြင်းက လက်တွေ့မကျတဲ့ ပန်းတိုင်တွေထားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ သူတို့ကို သင်မအောင်မြင်ပါက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှုံးသမားလို့ မြင်မိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- “ငါတစ်ပတ်ကို ၅ကြိမ်လောက် လေ့ကျင့်သင့်တယ်”လို့ သင်တွေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်အဲဒါကို မလုပ်မိဘူးဆိုရင် အဲဒီကိစ္စအတွက် အပြစ်ရှိသလို ခံစားရပြီး အဲဒါကို လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအား ဘယ်တော့မှရလိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သင်တွေးပါတယ်။
“တစ်ပတ်ကို ၅ကြိမ် လေ့ကျင့်ဖို့ ငါရွေးချယ်မယ်/နိုင်တယ်” လို့စဉ်းစားပါ။ တကယ်လို့ ဒီစကားလုံးတွေကို အသုံးပြုပါက သင့်လုပ်ရပ်တွေမှာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်ကို ရွေးချယ်ဖို့ လွတ်လပ်ခွင့်ပိုပေးပါလိမ့်မယ်။ အချို့နေ့တွေမှာ မလေ့ကျင့်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ မခံစားရပါဘူး။
သင့်ဆီချဥ်းကပ်လာတဲ့ အမျိုးသားက သင့်ရဲ့မပေါ့်တပေါ် ပုံတွေကို လိုချင်ရမ္မက်ငမ်းငမ်းတက်ပြီး ရောက်လာတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Wall မှာ သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံတင်လို့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အရာရာလုံခြုံစိတ်ချရဖို့က နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အထူးအားပြုသုံးစွဲနေကြသူတွေပေါ့။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကတစ်ဆင့် အပြင်မှာ ဒိတ်လုပ်ရင်း...
ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရာသီခွင်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် လက်တွဲဖော်တွေရဲ့ စရိုက်လေးတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ Aries (မိဿ) တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီရာသီခွင်အောက်မှာ မွေးဖွားလာပါက သင့်ထက်ပိုပြီး active ဖြစ်တဲ့လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကို သင်အမြဲရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ပျင်းစရာကောင်းတာတွေကို မလိုချင်တာကြောင့် သင်ဟာ...
ဒါကို ယုံချင်ယုံ၊ မယုံချင်နေပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေကို မုန်းတီးတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံ၊ သူတို့ရဲ့ ပြုမှုပုံနည်းလမ်းတွေကြောင့် မုန်းတတ်ကြပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်မိဘကိုယ်တောင် မုန်းမိနိုင်တာကြောင့် သူစိမ်းတွေနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို...